Deg deg:Ra'isalwasaare Stoltenberg"waxaa la ii sheegey inaan isqariyo oo aan…." – SBC
Deg deg:Ra'isalwasaare Stoltenberg"waxaa la ii sheegey inaan isqariyo oo aan…."
Ra’isalwasaaraha Norway Jens Stoltenberg ayaa Telefishinka TV2 ee wadanka Noway wareysi kooban oo uu siiyey wuxuu ku sheegay in xaaladu ay tahay mid aad u halis ah, waxaana uu sheegay in ciidamada Booliiska ay ku wargaliyeen inaanu shaacin halka uu ku sugan yahay taasi oo ah amaankiisa arin la xiriirta.
Tani waxay ka dambeysay weerarkii qarax ee loo adeegsadey baabuurka ee maanta lala beegsadey xafiiskiisa, iyadoo sidoo kale toogasho loo geystey dhalinyaro isugu soo baxdey Jasiirada Utoyo oo ay ku kulmayeen in ka badan 700 (Todobo boqol) oo dhalinyaro ah oo halkaasi ku lahaa kulan ku aadan taageerada xisbiga Labour ee talada wadankaasi gacanta ku haya, goobta kulankaasi oo ka dhacayey ayaa la filayey in intii aanu weerarku dhicin in uu gaaro Ra’isalwasaare Jens Stoltenberg.
Wararkii ugu dambeeyey, sawiro & muuqaalo F5 ama refresh ku hay SBC si aad ula soocto xaalada wadankaasi, sidoo kale dadka ku dhaqan magaalada Oslo ama wadanka Norway waxaan ka codsanaynaa inay noo soo gudbiyaan hadii ay jiraan wax dad Soomaali ah oo ka mid ah dadka dhaawaca ama dhimashadu la soo gudboonatay.
Abdirashiid Norway says:
warka xaqiiqdiisa waa intaas aad sheegteen sxbyaaal wadankana aniga ayaaa jooga wax somali ah kuma jirto hal ayaaa xooga firir ah soo gaarey